‘मर्नुपरे मन्दिरमै मर्छु, अस्पताल जाँदिनँ!’
‘मर्नुपरे मन्दिरमै मर्छु, अस्पताल जाँदिनँ!’ डा. केसीको स्वास्थ्य बिग्रिँदै
सुमन खत्री जुम्ला - शनिबार, असोज ३, २०७७
असोज लागेसँगै जुम्लामा चिसो बढ्दो छ। अबको केही सातापछि त तापक्रम माइनसमा पुगेर धाराको पानीसमेत बरफ बन्छ। यस्तो चिसोको सिरेटोसँग पौठेजोरी खेल्दै दुर्गमका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि लडिरहेका छन् डा. गोविन्द केसी।
सदरमुकामदेखि टाढा एकान्तमा रहेको बाबिरा मष्टोको मन्दिरमा केही समर्थकको साथमा मौसमसँग मात्रै होइन राज्यको व्यवहारविरुद्ध संघर्षरत छन् डा. केसी।
यस्तो चिसोमा त्यो पनि मन्दिरको आँगनमा बयस्क उमेरका मानिसलाई पनि खप्न निकै कठिन हुन्छ। तर, पाँचदिनदेखि भोको पेट बसिसकेका छन् केसी। ‘बरु मर्नु परे पनि यहीँ मर्छु, तर राज्यले नागरिकको स्वास्थमाथि खेलवाड गर्न पाउँदैन,’ दिउँसो भेट्न जाने जो कोहीलाई डो केसी भन्छन्, ‘शहरका नागरिक मात्रै यो देशका जनता होइनन् नि! यहाँका नागरिकले पनि आफ्नो पूरा आयू बाँच्न पाउनुपर्छ।’
दिउँसोमा डा. केसीको हाल बुझ्न मात्रै होइन, उनीसँग जाने जो कोही एउटा सपना बोकेर जान्छन्। यहाँका स्थानीय डा. केसीको चाहुरिएको अनुहारमा आफ्नो भविष्य खोज्दैछन्।
आज डा. केसी अनशनमा बसेको छैठौं दिन हो। यस्तो चिसो त्यो पनि बढ्यौली उमेर भएका कारण उनी कमजोर बन्दैछन्। स्वास्थ्य अवस्था दैनन्दिन कमजोर बन्दै गए पनि उनको मनमा रत्तिभर विचलन छैन। आजै दिउँसो भेट्न गएका स्थानीयलाई भन्दै थिए, ‘राज्यले यदि मार्ने खोजेको हो भने पनि म यहाँका नागरिकको न्याय र अधिकारको लागि मर्न तयार छु, तर कदापि म आफ्ुनो अडानबाट यसपटक भने पछि हट्नेवाला छैन।’
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि दक्ष जनशक्तिसहित पूर्वाधारको व्यवस्थापन र एमडी अध्यापनका लागि अनुमति पत्र माग गरेका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने उनको अडान छ।
दिनमा करिब तीन पटकसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरु उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न आउँछन्। सामान्य चेकजाँचबाहेक अन्य उपचार विधि डा. केसी आफैंले अपनाउन दिएका छैनन्। पाँच दिनदेखि भोको पेट र त्यो चिसोको सिरेटोले उनको स्वास्थय अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ।
शरीरका नसा तथा मांशपेसीहरु बाउँडिने, पिसाबमा कमी, मुटुका चालमा असन्तुलन लगायतका लक्षणहरु देखिएका छन्। प्रतिस्ठानका चिकित्सकहरुले आज रगत परीक्षणका लागि आग्रह गर्दा उनले रगत दिन नै मानेनन्। यहाँसम्म कि उनले अहिले सलाइन चढाउन पनि दिएका छैनन्।
चिकित्सकहरुले तत्काल सुरक्षित ठाउँमा सार्न सुझाव दिएका छन्। डा.केसी मर्नु परे पनि अनशनस्थलमै मर्छु तर सरकारले आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।
जीवनरक्षाको माग गर्दै दीप प्रज्वलन
दैनिक स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि स्थानीयले डा. केसीको जीवन रक्षको माग गरेका छन्।
आज देशभरी संविधान दिवसका अवसरमा खुसीयाली मनाउँदै दीप प्रज्वलन गरिएको छ। तर, जुम्लीले ‘खोजी संविधानको, खोजी अधिकारको’ भन्दै डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै दीप प्रज्वलन गरेका हुन्।
उक्त दीप प्रज्वलनमा डा. केसीका समर्थकसँगै स्थानीय नेताहरुको पनि सहभागीता थियो। कांग्रेसका पूर्व सांसद ललितजंग शाहीले डा. केसीको जीवनमाथि तलमाथि केही भए सरकारले राज्य हुनुको औचित्य नै गुमाउने बताए। ‘जो मान्छे जनताको जीवन रक्षाका लागि संघर्षरत छ, उसैको जीवन रक्षा गर्न सकेन भने कर्णालीवासीका लागि राज्य हुनुको औचित्य नै समाप्त हुनेछ’, उनले भने।
नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले दुर्गमका जनताको स्वास्थ्य अधिकार मागेर डा. गोविन्द केसीले अपराध गरेको जस्तो व्यवहार राज्यले देखाएको बताए। ‘उहाँले त जनताको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, तर राज्य कसका लागि हो। यी जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै अपराधिजस्तो व्यवहार देखाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले छिटोभन्दा छिटो माग पूरा गरी उहाँको जीवन रक्षाको दायित्व लिओस्। नत्र हामीजस्ता दुर्गमका जनताका लागि यो राज्य हुनु र नहुनुको अर्थ के रह्यो र?’